Uyigcina njani intshebe yakho yeentsuku ezintathu | Amadoda aQinisekileyo
Sele uthathe isigqibo, kwaye ufuna ukwenza ifayile Ukujonga intshebe iintsuku ezintathu, kodwa kukho into ekukhathazayo. Ndingayigcina njani igqibelele ngaphandle kokungakhathali? Ngaba kufuneka ndiyicuthe yonke imihla?
Iindevu zeentsuku ezintathu ifuna ukhathalelo nolondolozo, Siza kufunda ukuba singazenza njani ukuze sizigcine zilungile ngaphandle kokukuhlawula imali eninzi okanye ixesha elininzi.
1 Uyigcina njani intshebe yakho yeentsuku ezintathu igqibelele
2 Izinto ezi-5 ezibalulekileyo zokukhathalela intshebe yeentsuku ezintathu
Okokuqala, ngaphambi kokukhulisa iindevu zeentsuku ezintathu, Kuya kufuneka ucinge ukuba ngaba olu hlobo lweendevu luyakulungelaKutheni ufuna ukuyenza? Ngaba uza kukwazi ukuyigcina? Iindevu zeentsuku ezintathu zilungele bonke abo banqenayo ukucheba imihla ngemihla, okanye abo banobuso bomntwana kwaye bakholelwa ukuba intshebe yeentsuku ezintathu inokubanika ukubonakala okuvuthiweyo. Ezi zimbini iindlela ezintle zolu hlobo lokucheba, kodwa ukuba awukwazi ukuyigcina, ulibale ngayo.
Nje ukuba sigqibe kwelokuba sifuna ukuba neendevu zeentsuku ezintathu, Kubalulekile ukuba sithathele ingqalelo ukukhula kwendalo kweenwele zakho, ukuba uyabona ukuba kuyakufuneka usike yonke imihla, okanye ukuba ukucheba amaxesha ngamaxesha izakubamdala. Nje ukuba ulawule iindevu zakho, kubalulekile ukuba ukhathalele ikakhulu indawo ephezulu yezidlele kunye nendawo esezantsi yentamo, ukuze iinwele zingakhuli kakhulu kunye nokumila kwayo, kodwa zihlala zinika eyona imbonakalo, Ngamanye amagama, musa ukwenza konke okusemandleni ukukrola iindevu ngokuchanekileyo.
Eyona nto unokuyenza ukususa ezi nwele zingaphezulu, kukuqinisekisa ukuba i-gel yokucheba oyisebenzisayo ayinagwebu ngelixa utsheva, kwaye ikuvumela ukuba ubone ngokucacileyo okushiyekileyo kweendevu zakho.
Izinto ezi-5 ezibalulekileyo zokukhathalela intshebe yeentsuku ezintathu
Ukukhutshwa. Sithethile ngobude malunga neli nyathelo libalulekileyo, kwaye yile nto ukukhutshwa Kubalulekile ukukhathalela ulusu kunye nokucoca ibunzi leendevu. Ngale ndlela, uya kuziphelisa iiseli zolusu olufileyo ukuze xa utsheva i-glide igudise.
Ukucheba ijeli Emva kokukhutshwa kakuhle, thambisa ijeli yokucheba kwindawo apho ufuna ukususa iinwele, kwaye uzishiye imizuzwana engama-30 ukuze intshebe ithambe ngokupheleleyo.
Chetyiwe. Ngoku lixesha lokuba ulahle iindevu. Cheba ngobumnene kwicala lokukhula kweenwele. Sukungxama, yenze ngononophelo ukuze ungasusi iinwele ezininzi.
Gcina ubude beendevu. Uphi umda? Kude kube nini iindevu zeentsuku ezintathu? Akufanele uyishiye imfutshane kakhulu okanye inde kakhulu. Gcina ubude obukuvumela ukuba uyinciphise kwaye unakekele yonke imihla emibini, ngaphandle kokudinwa kakhulu.
Jonga indawo yomhlathi. Kubo bonke abo bafuna iindevu ezimfutshane, kubalulekile ukuba bathathele ingqalelo iinwele ezingaphantsi komhlathi. Njengoko sizama ukugcina inkangeleko yendalo yeendevu, kubalulekile ukuba uchebe ngokulinganayo. Njengoko usebenza indlela yakho ngaphantsi komgca womhlathi, qaphela uze ufike kwindawo yentamo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Uyigcina njani intshebe yakho yeentsuku ezintathu igqibelele
Igcinwa njani? Ndiyiphosile: /
Impethu emnyama sitsho
Phendula uMnyama Mpethu
Ihlobo lobuhlobo, 'iparisley' ihlobo (I)